စျေးကွက်တွင်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့် NEBULA Capsule mini projector ၏သုံးသပ်ချက် | Androidsis
NEBULA Capsule အသေးစားပရိုဂျက်တာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဒီနေ့ယူလာပါ အိမ်မှာရုပ်ရှင်ရုံချစ်သူများများအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုဖာပေါ်တွင်ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ကားကိုနှစ်သက်သူများအတွက်။ ကျနော်တို့ကြိုးစားရန်လုံလောက်သောကံကောင်းခဲ့ကြပြီ NEBULA Capsule mini projector။ ကမ်းလှမ်းတဲ့တစ် ဦး ကကွဲပြားခြားနားသောပရိုဂျက်တာ အပေါငျးတို့သသယ်ဆောင်နိုင်အခြားသူများကင်းမဲ့.
La ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဤအမျိုးအစားသည်အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များတွင်သိသာသည်။ ဖြည့်စွက်ကာ အလင်းရောင်ပါဝါနှင့်ပုံအရည်အသွေးကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။ အများကြီးပိုပြီးပြည့်စုံ devices များဆီသို့ ဦး တည်ချီတက်တော်မူပြီးမှ ကိုယ်ပိုင် CPU နဲ့ပါ။ သူတို့ရပြီ သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကို ၁၀၀% အိတ်ဆောင်စက်များအဖြစ်သိသိသာသာလျှော့ချလိုက်သည်.
1 တစ် ဦး က "ကိုမှန်ကန်" ကစားစရာအရွယ်ပရိုဂျက်တာ
2 အသေးစားပရိုဂျက်တာကိုဖြုတ်ခြင်း NEBULA Capsule
3 ၎င်းသည် NEBULA မှ Capsule Projector ဖြစ်သည်
4 NEBULA Capsule၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့်နည်းပညာ
5 NEBULA Capsule အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဇယား
6 NEBULA Capsule Mini Projector ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
တစ် ဦး က "ကိုမှန်ကန်" ကစားစရာအရွယ်ပရိုဂျက်တာ
ကျနော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါ Projector တစ်ခု gadget တစ်ခုလို အထွေထွေစည်းမျဉ်းအဖြစ် ကျနော်တို့၏စိတ်ကူးမှအရရ ထုတ်ကုန်ကြီးတစ်ခု။ ခြုံငုံစဉ်းစားစရာနေရာတစ်ခုယူမယ့်အိမ်သုံးပစ္စည်း။ တကယ်တော့, စက်ပစ္စည်း၏ဤအမျိုးအစားမေ့မေ့လျော့လျော့သို့ကျလိမ့်မည်, အများကြီးနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် တပ်ဆင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲများရှိသည်သူတို့ရှိခဲ့သည့်အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်အပြင်။
၎င်းကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန်မှာရှုပ်ထွေးမှုမရှိသော်လည်းခဏကြာပါသည်။ ပါဝါကြိုး, စပီကာ (၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာကြိုးတွေနှင့်အတူ), ဆက်သွယ်မှုများ... ဖော်ပြရန်မဟုတ် ပုံစံများနှင့်ပတ်သက်။ ကန့်သတ် သူတို့အချိန်တွင်မျိုးပွားနိုင်သည် (သို့မဟုတ်မနိုင်) ။ အဲဒါတွေကိုမင်းမှတ်မိလား slides? ထို ဆူညံပန်ကာ hum နောက်ခံလား ဤနေရာတွင် Amazon ရှိ NEBULA Capsule ကိုသင်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်
နှင့် အပြောင်းအလဲနဲ့ချစ်ပ်၏ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ပရိုဂျက်တာပေါ်, ဖြစ်နိုင်ခြေများကြီးထွားလာခဲ့သည် အလွန်တရာ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် "ဦး နှောက်" နှင့်အတူစက်ရှိခြင်း ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ options များတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်. ဆက်သွယ်မှုသည်၎င်း၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ပရိုဂျက်တာတွေကနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးထွက်သွားတော့မယ်။
ရက်အနည်းငယ်အဘို့ငါတို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ် Nebula Capsule mini projector။ အများဆုံးထဲကတစ်ခု ဤကိရိယာများကြုံတွေ့ရသောကြီးစွာသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ရှင်းလင်းသောဥပမာများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်ပရိုဂျက်တာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် နည်းပညာ၊ ရုပ်ပုံအရည်အသွေး မှလွဲ ဒီဇိုင်းနှင့်အရွယ်အစား။ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည့် Projector တစ်ခု ယခုအိတ်ကပ်ထဲ၌အကျယ်ပြန့်ဆုံးသောရုပ်ရှင်ရုံအိမ်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း.
အသေးစားပရိုဂျက်တာကိုဖြုတ်ခြင်း NEBULA Capsule
သေးငယ်တဲ့ Capsule ပရိုဂျက်တာနှင့်အတူငါတို့ရှာပါ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ unboxing။ နှမြောစရာမရှိ၊ ငါတို့ရှိသည် ပရိုဂျက်တာ, သင်၏လက်၌ရှိခြင်းအားဖြင့်သင်ပြီးသားသတိထားမိနိုင်ပါတယ် ၎င်း၏ပစ္စည်းများအတွက်အရည်အသွေးနှင့်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေး၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်း.
သင်က box ထဲမှာလိုက်ပါသွားကြသည် မိုက်ခရို USB format နဲ့အားသွင်းကြိုး။ un အဝေးထိန်း ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာများလည်းရှိသည်။ တ ဦး တည်း အသုံးပြုခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန် စပိန်ဘာသာစကားလည်းပါတယ်။
၎င်းသည် NEBULA မှ Capsule Projector ဖြစ်သည်
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်နှင့်အရွယ်အစား ဒီအသေးစားပရိုဂျက်တာ၏အများဆုံးသောရှုထောင့်နှစ်ခုရှိပါတယ် သူတို့ကအာရုံကိုဆွဲဆောင်တယ် မြင်မြင်ချင်း။ Projector အရွယ်အစားနှင့် တစ်ဆိုဒါလုပ်နိုင်တဲ့၏အသွင်သဏ္ဌာန်, ငါတို့ဆက်ဆက်ကျနော်တို့မမြင်ခဲ့ဘူးတစ်ခုခုပါပဲ။ အမှန်တရားကတော့အဲဒါကိုငါတို့ချစ်မြတ်နိုးတာပါပဲ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်တ ဦး တည်းရှုထောင့်သည်သေးငယ်ပေမယ့်ပြတယ် အရည်အသွေး.
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်ပါ တိုကျရိုကျ ကိုယ်ပိုင် Projection မှန်ဘီလူး ကမ်းလှမ်းနိုင်သည် 100 လက်မအထိမျက်နှာပြင် အရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ။ မှန်ဘီလူးအောက်တွင်တည်ရှိသောစက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်သည် 360ºအသံပေးထားပါတယ်တဲ့စပီကာ. Omnidirectional အသံကျယ် ဒါကြောင့်သင်ဟာအသေးစိတ်ကိုမဆုံးရှုံးဘဲအရာရာကိုမြင်နိုင်၊ ကြားနိုင်ပါပြီ။
ထဲမှာ နောက်ဘက် ငါတို့တွေ့ပြီ ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ဆိပ်ကမ်းများ။ ကျနော်တို့ format နဲ့အတူ connector ကိုရှိသည် မိုက်ခရို USB ဘယ်မှာကျနော်တို့က၎င်း၏ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်လည်းလက်ရှိသို့ပလပ်ထိုးသုံးနိုင်သည်။ ငါတို့မှာလည်း connector တစ်ခုရှိတယ် HDMI ကျွန်ုပ်တို့သည် NEBULA Capsule တွင်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာကိုဖွင့်လိုသည့်အခြားမည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာသာဖြစ်ပါက၊ သင်၏ NEBULA Capsule mini projector ကိုဤနေရာတွင်ဝယ်ပါ အမေဇုံအပေါ်အခမဲ့ရေကြောင်းနှင့်အတူ။
တစ်ဦးအတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ငါတို့တစ်ခုတွေ့တယ် လက်စွဲစာအုပ်အာရုံစိုက်ဘို့ဘီးပုံကနေဌ။ ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာနှင့်နေရာမရှိတော့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ပုံရိပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ချဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ချဲ့ခြင်းပြုလုပ်ပါကနံရံတစ်ခုပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပရောဂျက်ပြုလုပ်မှသာလျှင်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘီး ချိန်ညှိချက်များပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ချွန်ထက်သောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်.
ယင်း၏အတွက် ထိပ်ဆုံး ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ခလုတ်ကို format နဲ့လက်စွဲ (မထိပါဘူး) ကျနော်တို့ခလုတ်ကိုရှိသည် အဖွင့်အပိတ်, ထိန်းချုပ်မှု အသံအတိုးအကျယ်နှင့်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်သောအခြား စပီကာ mode ကိုသို့မဟုတ်ပရိုဂျက်တာ mode ကိုအကြား switch သည်.
NEBULA ၏ Capsule Mini Projector သည်အဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ က မီနူးမှတဆင့်အလွယ်တကူရွှေ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ထိန်းချုပ်မှု။ ကျနော်တို့က "mouse ကို" ခလုတ်ကိုကြိုက်တယ် mouse ကိုအသုံးပြုသကဲ့သို့ cursor ကို screen တစ်ဝိုက်တွင်ရွှေ့နိုင်သည်.
NEBULA Capsule၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့်နည်းပညာ
အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပရိုဂျက်တာများအများဆုံးပြောင်းလဲခဲ့သောကဏ္ aspects တစ်ခုမှာဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ NEBULA Capsule ကမ်းလှမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောဆက်သွယ်မှုရွေးစရာများ။ ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ ဝိုင်ဖိုင်၊ Bluetooth၊ HDMI နှင့် option ကိုလိုက်ဖက်တဲ့ မျက်နှာပြင်ထင်ဟပ်။ မင်းရဲ့ mini projector မှာသင်လိုချင်တာအားလုံးကိုတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။
una ကိုယ်ပိုင် CPU ကို quad-core chip ပါ ၀ င်သည်, 1GB RAMမှတ်ဉာဏ်တစ်ခု 8GB ROM နှင့် GPU ကို Adreno 304 သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန်အတွက်သူတို့သည်အလွန်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအသင်းတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်အတူ အန်းဒရွိုက် 7.1 Netflix နှင့် YouTube ကဲ့သို့ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည့် application များသည်၎င်းကိုဖွင့်ရုံဖြင့်သင်၏အိမ်ကိုအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များ၊ အားကစားများနှင့်အရွယ်အစားလက်မ ၁၀၀ အထိရှိသည့်သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကို“ ဝင်တိုက်” ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်း၏အဆင့်မြင့် DLP InelliBright algorithm ကို တောက်ပစေသည် ငါတို့နှင့်အတူရန်အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်ကြောင်း 100 ကျော် lumens အထိ ပြင်းထန်မှုကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲလုံး ၀ မှောင်မိုက်နေသောအခြေအနေများမရှိဘဲပင်မြင်နိုင်သည်။ အများဆုံး 3,08 မီတာကွာအထိ။ ထိုအခါအတွေ့အကြုံက၎င်း၏အသံအပြည့်အဝသော၎င်း၏ omni-directional စပီကာနှင့်အတူတိုးမြှင့်ထားသည်။
ဤနေရာတွင်ကလစ် နှိပ်၍ သင်၏ NEBULA Capsule ကိုယခုရယူပါ
unboxing တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသော command အပြင် NEBULA Capsule ၌ပါ ၀ င်သည် သင့်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေတဲ့ကိုယ်ပိုင် App တစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော interface တစ်ခုကြောင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ သငျသညျအဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နှင့်သင်ရွေးချယ်စရာများနှင့် settings ကိုအားလုံးဝင်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
NEBULA Capsule အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဇယား
NEBULA ANKER က
Projection မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 100 လက်မ
အကွာအဝေး 3.08 မီတာ
အရောင်အဝါ 100 lumens
မျက်နှာပြင်ရှုထောင့်အချိုး 16: 9
စီပီယူ Quad core A7
GPU ကို Adreno 304
RAM ကို 1 GB ကို
ROM မှတ်ဉာဏ် 8 GB ကို
ဘက်ထရီ 5200 mAh ဘက်ထရီ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး4နာရီတိုငျအောငျ
ဆက်သွယ်မှု ဝိုင်ဖိုင် - ဘလူးတုသ် - HDMI
ပန်ကာဆူညံသံ <30 dB
operating system ကို အန်းဒရွိုက် 7.1
ရှုထောင့် X ကိုက x 6.79 6.79 11.99 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် 472 ဂရမ်
စြေး 421.90 €
ဝယ်ယူ link ကို NEBULA ဆေးတောင့်
NEBULA Capsule Mini Projector ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပရိုဂျက်တာ mode တွင်4နာရီအထိ နှင့်စပီကာအဖြစ်နာရီ 30
အရည်အသွေး 100 lumens ပုံရိပ်နှင့်တောက်ပ
El ပန်ကာဆူညံသံသော်လည်း သာမာန်အောက်, ဆဲကိရိယာ၏ဤအမျိုးအစား၏ဆိုးကျိုးများတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဘယ်သူမျှမ တစ်ဆိပ်ကမ်းကိုရှိပါတယ် USB port
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » NEBULA Capsule အသေးစားပရိုဂျက်တာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လူသား ... ANSI lumens ၁၀၀ ပဲရှိတာကိုငါမသိဘူး ... ဒါကြောင့်ကလေးတွေကလက်တင်စကရင်မြင်ကွင်းမှာရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်၊ တခြားအရာအားလုံးအတွက်အရမ်းတိုတောင်းတယ်။
Do tertulias သို့ပြန်သွားပါ
Spotify မှာသုံးစွဲသူသန်း ၁၃၀ ရှိပါတယ်